गर्गन्त ला ओलामा के हेर्ने | यात्रा समाचार
तपाईंले फोटोमा देख्नु भएको ल्यान्डस्केप लोकप्रिय साइटको रूपमा चिनिन्छ गार्गन्ता ला ओल्ला। मा पाइन्छ Extremadura, स्पेन बनाउने स्वायत्त समुदाय मध्ये एक र जुन देशको दक्षिण पश्चिममा छ।
के तपाइँ यसलाई जान्न चाहानुहुन्छ, हिड्न, यसको परिदृश्यहरू हेर्न, खानको लागि र केहि रमाईलो दिनहरू खर्च गर्न अहिले साँच्चिकै सुन्दर दिनहरू सुरू भएको छ? त्यसोभए यस लेखलाई हेर्नुहोस् देख्नै पर्छ Extremadura को यस सुन्दर कुनामा।
1 गार्गन्ता ला ओल्ला
2 गार्गन्ता ला ओलामा के हेर्ने
गार्गन्ता ला ओल्ला
आधिकारिक रूपमा यो एक नगरपालिका हो जुन भित्र छ Cáceres प्रान्त र यसको लगभग एक हजार बासिन्दाहरु छन्, अरु केहि छैन। यो एक साइट हो जुन यसको भूगोलबाट नक्काशीको द्वारा चित्रण गरिएको छ गोर्जेस, घाटीहरू, अर्थात्, ग्रुवहरू समयको बगैंचा र एपिगेनेसिस भनिने प्रक्रियाको माध्यमबाट पृथ्वीमा खोदिन्छ। नतीजा एक फाटो, एउटा घाटी हो, सामान्यतया धेरै ठाडो पर्खालहरूको साथ।
विशेषज्ञहरु भन्छन् शताब्दियौंदेखि यस क्षेत्रलाई आबादी दिइयो प्राचीन Vettones किल्लाहरू फेला परेकोले। भिजिगोथले पनि दुई मठहरूको स्थापना गरे, आज भग्नावशेषहरूमा। पहिलो शहर उच्च मध्य युगमा निर्माण गरिएको थियो र यो यो पहिलो जनसंख्या हो जुन सामान्यतया गार्गन्त ला ओल्ला वा गरगान्ता डे ला ओल्लाको रूपमा चिनिन्छ। गाउँ दुई घाटीको संगममा छ, सान ब्लास वा ला मेयर।
यी देशहरू केही समयका लागि अरबको हातमा थिए र पछि इसाई हातमा फर्किए। समय बित्दै जाँदा, गृहयुद्धको समयमा यो राष्ट्रवादी पक्षको अधीनमा थियो र २० औं शताब्दीभरि ग्रामीण इलाकाबाट सहरमा बसाइँ सर्ने क्रममा यसको जनसंख्या घट्न थाल्यो। १ 1982 XNUMX२ देखि शहर र यसका पुराना भवनहरू घोषित भए ऐतिहासिक - कलात्मक जटिल।
गार्गन्ता ला ओलामा के हेर्ने
यसको प्रकृति ईर्ष्या योग्य छ त्यसैले यो कुनै पनि प्रकृति प्रेमीहरूको लागि ठूलो हो, तर हामीले भनें, शहर ऐतिहासिक-कलात्मक कम्प्लेक्स हो त्यसैले तपाईंसँग सबै थोरै चीज हुन्छ। पहिलोबाट सुरू गरौं:
तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ सान मार्टेनको हर्मिटेज, ला सान्तासिमो क्रिस्टो डेल ह्यूमिलाडेरोको हर्मेटेज, ला हाकिम को घर र सान लोरेन्जो मार्टिरको चर्च, यसको ब्यारोक अंग र यसको -० मिटर टावरको साथ, उदाहरणका लागि। दोस्रो हर्मिटेज १ 30 औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र यसमा धेरै नयाँ मर्मतसम्भारहरू भैसकेका छन् तर तपाई भित्र टालाभेरा टाइलहरू र १ XNUMX औं शताब्दीका हतियारहरूले सजाइएको सुन्दर वेदी देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ पनि छ गुडियाको घर, पुरानो घर जुन सम्राट चार्ल्स पांच का व्यक्तिहरुका लागि वेश्यालयको रूपमा काम गर्थे जब उनी यात्रा गर्थे र बस्थे युस्टे मठ। घर यसको नीलो र colored्गको छ, तब र आज यसको खास प्रकार्यलाई पहिचान गर्नका लागि। को पोष्ट हाउस यो घर यात्रुलाई कार्लोस V को समयमा प्रयोग गरिएको घर हो। त्यहाँ पनि छ Carvajal हाउस, यसको हतियारको महान कोटको साथ, र बारियो डे ला Huerta को सबै राम्रा सडकहरू।
थप्नुहोस् जुम्ल्याहा घरहरू, ला पेनाको घर, ला भाग्य को छोरीहरु को घर, the भिखारी र गरीब अस्पताल वा फ्रान्सिस्को दाज हाउस १ 1573 बाट डेटि which, जुन शहरको सब भन्दा पुरानो हो र मुडेजर शैलीमा ईन्टरको एक फ्रेमवर्क सहित दुई फ्लोरहरू छन्। दाज त्यसबेला चर्चको मास्टर बिल्डर थिए र उनी चर्च र त्यहाँको टावरको देखभाल गर्ने बास्क थिए।
La फेलिक्स मेसेन गोमेजको घर उहाँ राम्रो परिवारको सदस्य हुनुहुन्थ्यो र फाउडमा तपाईंले शिल्डलाई मध्यस्थतामा काटिएको देख्न सक्नुहुनेछ किनभने उहाँसँग अनुसन्धानसँगको नजिकको सम्बन्ध थियो। को पैरिस हाउस यो १ 1760० को हो र यसले स्थानीय पादरीको घरको रूपमा काम गरिरहेको छ। को Chorrillo सडक यो शहरमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण छ र एक सानो फवारा पनि छ। यदि तपाईं त्यहाँ रोक्नुभयो भने तपाईं केही सेकेन्ड लिन सक्नुहुनेछ शहरी परिदृश्य यति धेरै भरिएको हेर्न पुराना घरहरू र काठको बालकनीहरू।
अन्ततः बिर्सनुहोस् म्यूजियो डे ला इंकिसिसिन, कद्दू, यातना कोठा र macabre तत्वहरू संग कैदमा लागू गरिएको एक भयानक संग्रहालय, र १ 21 औं शताब्दीमा रेशमको ठेक्काको घर बनेको छ (१ba औं शताब्दीमा अल्बाको डुक्सको घर), २१ नम्बरमा)।
अब प्राकृतिक परिदृश्यको पालो हो। स्पष्टतः त्यहाँ घाँसेहरू छन् जुन क्षेत्रको विशेषता हो। हामीसँग छ गार्गन्ता मेयर, गर्गन्ता डे ला पिरोनाला र गर्गन्ता डे लास मजाडिल्लासउदाहरण को लागी। राम्रो यात्रामा घाट, प्राकृतिक पोखरी र भाँडाहरू सामेल हुन्छन्। धेरै जना शहरको प्रवेश द्वारमा नै हुन् यदि तपाईं कुआकोस डे यूस्टेबाट आउनुभयो भने। ठीक सडकमा तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ ला सेराना डे ला भेराको दृष्टिकोण.
यहाँ एक महिलाको मूर्ति छ, जो कथाको पात्र हो, उनी अनुसार, प्रतिष्ठित र शक्तिशाली स्थानीय परिवारको सदस्य इसाबेल डे कारभाजललाई प्लासेनियाको बिशपका भतिजाले वेदीमा छोडिदिए। त्यसोभए, बदला लिई ती आइमाई पहाडको गुफामा बस्न र बस्न यात्रीहरूलाई धोका दिए र उनीहरूलाई मार्न। उनी क्रसबो र डगरले सशस्त्र थिइनन् र त्यसपछि उनलाई ला सेराना नामले चिनिन्थ्यो।
यदि तपाइँ गर्मीमा जानुहुन्छ, एक राम्रो विचार, तपाइँले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ प्राकृतिक पोखरी ताजा पानी को। तपाईं तिनीहरूलाई गर्गान्ता मेयरमा पाउनुहुन्छ, केवल पुलको मुनि पट्टी तपाईं शहरबाट केवल एक किलोमिटर टाढामा युस्टे मठमा पुग्नुहुन्छ। यदि तपाईं कारबाट हुनुहुन्छ भने तपाईं सडकको छेउमा पार्क गर्न सक्नुहुन्छ र हिड्न सक्नुहुन्छ। को विशालको केटल यो पुल मुनि एक हो, कहिलेकाँही यहाँ पेय र खाना किन्नको लागि बीच बीच पनि हुन्छ। यदि तपाईं सहमत हुनुहुन्न भने, हिंडिरहनुहोस् र तपाईंले अरू पोखरीहरू पाउनुहुनेछ।
तपाईं पुल पार गर्नुभयो र त्यहाँ पोखरीको एक जोडी संग एक झरना छ, शान्त छ। यदि तपाईं नदीमा हिड्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै चिनो गरीएको मार्गमा जुन नदीको भित्र र बाहिर जान्छ, तपाईंले विभिन्न आकारका थप पोखरीहरू पाउनुहुनेछ। तपाईंले भर्खर खोज्नु पर्छ जब सम्म तपाईंले आफ्नो ह्या hang आउट गर्न मन पराउनुहुन्न।
अन्तमा, तपाई केहि शपिंग गर्न सक्नुहुन्छ: भेरा पेप्रिका, ट्राउट, एकोर्न बियर, मागास, सॉसेज, र बाख्रा चीजउदाहरण को लागी। एक्स्ट्रेमादुराको यो अंश एकदम सुन्दर छ त्यसैले यदि तपाईं कारबाट जानुहुन्छ भने तपाईं शहरबाट शहर जान सक्नुहुनेछ विभिन्न डिशहरू प्रयोग गर्दै, नदीमा शीतल गर्दै, गर्मीमा रमाईलो गरी।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » गार्गन्ता ला ओल्लामा के हेर्ने